MDC members arrives at court in Harare
Nhengo nhanhatu dzebato reMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa, idzo dzakasungwa muHarare neChishanu, dzabvisiswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora emuZimbabwe pamunhu kuitira kuti dzitongwe dzichibva kudzimba dzadzo.
Vapihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nemutongi wedare remajisitireti, Amai Bianca Makwande, vatevedzeri vaviri vaVaChamisa; VaTendai Biti naAmai Lynett Karenyi Kore; munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Muzvare Gladys Hlatywayo; mutevedzeri wemunyori wezvekudyidzana nedzimwe nenyika, VaLovemore Chinoputsa; nhengo yeNational Standing Committee, uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru webato, VaDavid Chimhini naAmai Vongai Tome.
Vanhu ava vanzi vabvise mari inoita chiuru chemadhora pamunhu zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nezuro zvichitevera gakava riripo panyaya yemuzinda weMDC weMorgan Tsvangirai House.
Amai Makwande vati vasungwa ava vazodzoke kudare musi wa 24 Chikunguru uye kuti vagare pamakero avakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa.
Vachitaura neStudio7 mushure memutongo uyu, rimwe regweta evatanhatu ava, VaAlec Muchadehama, vati dare ratiwo vanhu vavari kumirira vasakanganise kuferefetwa kwenyaya iyi.
VaMuchadehama vatiwo kunyangwe hazvo vatanhatu ava nezuro vaipomherwa mhosva yekukonzera musindo pasi pemutemo we Criminal Law (Codification and Reform) Act, vasungwa ava vange vambouya kumatare mangwanani vakadzorerwa kumapurisa uko kwazonowedzerwa mhosva yekutyora mutemo une chekuita nekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19.
Magweta evatanhatu ava anyunyutawo kudare nemabatirwo avanoti akaitwa vasungwa.
VaMuchadehama vati vasungwa ava havana kuchengetedzwa zvakanaka zvaiita kuti vasabatirire kana kutapurira vamwe chirwere cheCOVID-19 pavaive muhusungwa.
Mutungamiri webato iri, VaNelson Chamisa, vati vacharamba vachirwira shanduko munyika zvisinei nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzavo
Amai Makwande varamba kuti mutevedzeri wemutauriri wevechidiki mubato iri, VaWomberaishe Nhende, avo vari kurapwa mune chimwe chipatara, vasarambe vari muhusungwa.
VaNhende vanonzi vakakuvara nezuro apo vakasungwa ndokubva vaendeswa kuchipatara.
Mune imwe nyaya yanga iri mumatare, Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti mupurisa akasungwa mushure mekufananidza mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nekondomu rakashandiswa, amiswawo mutare akabvisiswa mari yechibatiso inoita mazana matatu emadhora.
Mupurisa uyu, Shungudzemoyo Kache, achatongwawo achibva kumba kwake.